ए साथी हो ! के म्यासेज पठा’को यो ? | PaniPhoto
ए साथी हो ! के म्यासेज पठा’को यो ?	paniphoto / June 20, 2012 /4Comments म सानै छदा एकपटक कता कताबाट मेरो हातमा एउटा पत्र आयो जसले मेरो बालमस्तिष्कमा निकै ठुलो दवाव दिएको थियो । पत्र धार्मिक प्रकृतिको थियो । लेखिएको थियो, ‘एउटा मन्दिरमा सर्प आयो अनि पुजारीलाई चिठी बाड्नु भन्यो । पुजारीले बाड्यो । पुजारी धनि भयो । यही सिलसिलमा पत्रमा थपिएको थियो । एउटा व्यापारीले पत्याएन अनि चिठी पढेर फालिदियो । त्यही रात उसको पसलमा आगो लाग्यो अनि एक्कासी छोरो पनि मर्र्यो ।’ यस्तो लेखेको पत्र मेरो हातमा कुन साथीले थमाईदियो, मैले थाहै पाइन । फाल्यो भने मरिन्छ भनेर मैले अरुलाई दिन अनेक उपाय लगाएँ तर पहिले नै बल्ल बल्ल सल्टाएर खुसी भएका कुन चै साथी फेरि फस्थ्यो र ? मैले कसै गरे पनि स्कुल छुट्टि हुँदासम्म पत्र मेरो हातमै रह्यो । किताबमा चेपेर रुदै घर हिडें । मेरो गाउको एकजना दाईले थाहा पाएर केहि हुदैन भन्दै त्यो पत्र फालिदिए । राती केहि भइहाल्छ कि भनेर त्यो रातभर म डराएर ननिदाई झर्लगं पारे । अहिले फेरि मोबाइल, फेसबुक र इमेलमा त्यस्तै सन्देश आएर हैरान पारिसक्यो, केहि सन्देशहरु यस्ता छन् ।
जब ति दाइले त्यो पत्र फालिदिए उनलाई केहि भएन । अनि म कति मुर्ख रहेछु भनेर मैले पत्तो पाएँ । तर आजभोली मेरा मित्रहरु त्यहीबेलाको म जस्तै मुर्ख बनेर यस्तै कुरा पत्याएर प्रचार गरिरहेका छन् । सायद प्रविधिले गर्दा होला, एसएमएस तथा फेसबुक र इन्टरनेटको सहायता लिएका छन् । बितेका ५ दिन भित्र मैले ५० वटा भन्दा बढि यस्ता एसएमएस पाईसकेको छु । कुनै हितैषीको नाममा एसएमएस आउँछ, जब त्यो एसएमएस खोल्छु यस्तै प्रकृतिका सन्देशहरु हुन्छन् । म आजित भइसके । यो सबै भ्रामक कुराको पछी नलाग भनेर के सम्झाई रहनु ? नजान्ने अबुझ त तिनीहरु पनि कहाँ छन् र ?
तर यसलाई म एउटा सामान्य सन्देशका रुपमा चित्रण गर्दिन । सन्देशहरु सबैमा शुभसमाचारका कुराहरु मात्र छैनन् । त्यहाँ नमिठो धम्की पनि लुकेको छ । कुनै निश्चित दिन भित्र यति मान्छेलाई नपठाए, दुर्भाग्य निम्तिन्छ या मर्न सक्छस् भन्नुको के अर्थ हुन्छ ? यो सरासर धम्की होइन ? कुनै बालबालिकाले यो सन्देश पाए उनीहरुको बालमस्तिष्कमा कस्तो असर पर्छ ? मोबाइलबाट यसरी एउटा सामान्य मान्छेलाई धम्क्याउँनुलाई शुभसमाचारको प्रेषण मान्न सकिने कुनै आधार छ ? फेसबुकमा साथी खोज्दै बसेको मान्छेले यस्तै म्यासेजको आशा गरेको हुन्छ ?
नोट: यस्तै समस्याले सताउँदा पानीफोटोमा पहिले पनि लेखेको थिएँ । तर फेरि पनि समस्या उस्तै । यस्ता म्यासेजहरुले दिक्क पारिसक्यो । यसैले लेखेको हुँ । म्यासेजमा उल्लेख भएका देवीदेउताहरुको अपमान गर्ने नियत हैन ।
Tags: ए साथी ! के म्यासेज पठा'को यो ? / Posted in: सन्दर्भ बिशेष
milan gurung says: June 20, 2012 at 11:30 pm / Reply
हो तपाइको भनाई मलाई सारै मनपर्यो राम्रो सल्ला सुझाब दिनु भयकोमा दन्याबाद !
Amit Dangol says: June 21, 2012 at 3:32 am / Reply
बेकारमा मान्छेहरुको पनि काम हुदैन कि क्या हो ! समय र पैसाको खर्च गरि गरि मान्छेलाई दुख दिने/ वाइयात कुराहरु पठाएर/ जसलाई विश्वास लाग्छ त्यसले गर्ने नि अरुलाई किन दुख दिनु ? मलाई पनि यस्ता म्यासेजहरुले हैरानै पारिसक्यो महीमा says: June 21, 2012 at 12:16 pm / Reply
सबैको ओखति बनाए देउताले बिर्सेछ बनाउँन ओखती मुर्खको भनेको हो रे च
Ganesh man shrestha says: June 23, 2012 at 2:20 pm / Reply
thank for this advise. LeaveaComment Cancel Reply	Name * Email * Website Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)